डिभी भर्नु भएको छ ? नतिजा निस्क्यो है !
ARCHIVE, SPECIAL » डिभी भर्नु भएको छ ? नतिजा निस्क्यो है !
काठमाडौँ - अमेरिकाले सन् २०१८ को इडीभीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राती नतिजा सार्वजनिक भएको हो । नतिजा प्रकाशित भएसँगै नतिजा हेर्ने वेव साइटमा भने केहि समस्या देखिएको छ। नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१६ को अक्टोबर ४ देखि नोभेम्बर ७ सम्म इडिभी प्रोग्रामअन्तर्गत अमेरिका जान इच्छुक र शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरुले भरेको डिभी लोटरीको नतिजा सार्वजनिक हुन लागेको हो ।